पत्त्याउनु हुन्छ ? ७ वर्षीय बालकको मुखबाट निकालियो ५२६ दाँत ! डाक्टरले भने, ‘मोबाइल टावरको रेडिएशनले यस्तो हुनसक्छ’ – ताजा समाचार
पत्त्याउनु हुन्छ ? ७ वर्षीय बालकको मुखबाट निकालियो ५२६ दाँत ! डाक्टरले भने, ‘मोबाइल टावरको रेडिएशनले यस्तो हुनसक्छ’